Ebe a bụ anya na ụfọdụ n'ime ndị kasị mma kọfị ọṅụṅụ na i nwere ike ịhụ na ahịa taa. Na n'elu nke anyị ndepụta bụ Keurig, The Original donut ahịa Ịgachi, Ọkara Extra n'Atụghị Egwu, K-Cup ngwugwu, 72 ịgụ. Nke a bụ kọfị nwere a juputara n'ụtọ uto. Ọ na-atọ nnọọ obi ike na nwere ihe ndị magburu onwe flavor nakwa. Otu iko a magburu onwe kọfị ọṅụṅụ ga-abụ n'ezie mma.
The Keurig, Ọkara Extra n'Atụghị Egwu
The Keurig, Ọkara Extra n'Atụghị Egwu, bụ ọkara anụ kọfị na e gbaara na-kọsha. Dị ka ọnụ size, ọ na-abịa na isii katọn, ọ bụla nke nwere iri na abụọ K-cup ngwugwu kpam kpam iri asaa na abụọ K-cup ngwugwu niile. Ma ị na-onye hụrụ ha n'ụtụtụ iko kọfị ma ọ bụ ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-aṅụ kọfị usọrọ otu oge, ị na-aga a n'anya kọfị ọṅụṅụ.
The San Francisco Bay OneCup, 80 Single ozi coffees bụ a ngwakọta nke ma Central nakwa dị ka South American coffees. Nke a kọfị ga-aka kpochapụ gị n'ụtụtụ foogu. Nke a kọfị nwere a juputara n'ụtọ uto ma ọ bụ na-excellently ezi. The San Francisco Bay OneCup kwekọkwara ọ bụla Keurig K-Cup Brewer nakwa dị ka na ihe ọ bụla dakọtara otu ozi Brewer. Otú ọ dị, ọ na-apụghị ga-eji na họrọ Keurig brewers. Mgbe ị zụrụ a kọfị ọṅụṅụ ị na-aga ghaghị emetụta ndụ nke ọtụtụ puku ndị mmadụ na-arụ ọrụ n'ugbo n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Ihe bụ ihe ọzọ, na Arabica kọfị eji na a kọfị ọṅụṅụ ndị kasị mma na i nwere ike ịhụ. Ala akara bụ na a na kọfị ọṅụṅụ bụghị nanị oké aṅụ kamakwa na ọ na-packaged ke ere ure nkwakọ. Ugbu a, mgbe ị na-enwe gị otu ozi kọfị ị pụrụ ime otú n'enweghị obi amamikpe na ị na-eme ka mmetọ.
Kọfị Dịgasị Iche Iche Sampler mkpọ
Mgbe ị zụrụ kọfị Dịgasị Iche Iche Sampler abịa ị na-aga a n'anya igbe kọfị dị ka ọ na-enye dị iche iche iko kọfị-adị kwa ụbọchị. Ị na-anọ iche iche otu ozi iko nke flavored kọfị si n'elu iri na asatọ dị iche iche ụdị. Bụ akụkụ kasị mma bụ na ị dịghị esi a oyiri ika. Ị nwere ike iji nke a kọfị ọṅụṅụ ọ bụla na-Brewer na bụ dakọtara na Keurig K-cup. Mgbe rere, ị ga-esi ịzụta dị iche iche ụdị gụnyere ndị dị ka Crazy iko na Eko iko nakwa dị ka a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọzọ na-akpali akpali ụdị.
Nespresso Dịgasị Iche Iche Pack capsules
The Nespresso Dịgasị Iche Iche Pack capsules bụ ihe kasị mma kọfị ọṅụṅụ maka onye ọ bụla na-arụ ọrụ ma ọ bụ onye na-mbubreyo ịmụ maka ihe na-abịa udomo. Nke a kọfị na-enye gị kacha ahụmahụ na ga-enyere gị ịmụrụ anya na ịnọgide ruo ọtụtụ awa na ọgwụgwụ na-enweghị mkpa na-eche na ị na-aga na-eche ike gwụrụ na umengwụ ma ọ bụ na-ata ahụhụ mmetụta. Onye ọ bụla igbe e dere iri capsules ọ bụla n'ihi na a dị iche iche flavor. Ọ bụkwa dakọtara na ụdị Nespresso igwe na bụ nnọọ adaba na-eji nkezi nke kọfị mmanya.